Andro iray nivavahana ho an’ny fandriam-pahalemana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Notinapaky ny mpitantana ny diosezin’Antsirabe fa ho andro natokana hivavahana ny talata 25 avrily maraina. Tsy nosokafana noho izany ny sekoly katolika rehetra ary tahaka izany koa ireo sampan-draharahan’ny Fiangonana. Natao izao fotoana izao ho fiaraha-mivavaka, hanoherana ny herisetra hampanjakana ny fandriam-pahalemana eto amin’ny firenena. Tsiahivina fa nanana ny nanjo azy manokana ny diosezin’Antsirabe ary nitondra takaitra anaty ireo relijiozy vavy ao tao Antsahatanteraka.
Raha ny tao amin’ny foibe toeran’ny diosezy dia nisy ny Sorona masina natao tao amin’ny kianja malalaky ny Lisea Md Josefa Antsirabe. Mgr Philippe Ranaivomanana, evekan’ny Diosezin’Antsirabe, no nitarika izany fotoana izany notronin’ireo pretra maro. Kristianina maro no namaly ny antso io maraina io.
« Aza mety ho resin’ny ratsy, reseo amin’ny soa ny ratsy” no lohahevitra no raisina ho fanairana sy hifampitaizana. Misy telo loha ny nandrisika ny diosezy hanao hanokana izao talata 25 avrily izao hiarahana mivavaka dia eo ny fiombonam-po amin’ireo rehetra niharan’ny herisetra sy vono olona na iza na iza na kristianina na tsia. Manameloka ny fandatsahan’aina sy famonoan’olona ny Eglizy katolika ary fampieritreretana matoa misy ny ratsy dia eo koa ny tontolo iainana efa mihalò
Nasongadin’ny Eveka nandritra ny fampianarana nataony ireo endrika herisetra niseho teto amin’ny firenena na tany amin’ny toerana misy ny lavanila nokapakapain’ny jiolahy ny raim-pianakaviana sy nandratrana ny zanany sy ny renim-pianakaviana. Toy izany koa ny fanafihana tamin’ny tranona fikambanan-drelijiozy tany Antsohihy ka nahafatesana pretra relijiozy ao amin’ny fikambanana Capucin sy naharatrana frera ary teo koa ny tranga tany Antsakambary. Ny tao amin’ny faritr’Antsirabe manokana dia nisy ny loza nitranga feno herisetra mihatra amin-tsaina sy amam-nofo nahazo an-dry masera tao Antsahatanteraka.
Tsapa tokoa fa mihamahazo vahana ny vono olona manerana ny nosy sy ny herisetra ataon’ireo tia tena sy maty eritreritra. Manjaka ny kolikoly amin’ny sampan-draharaha isan’ambaratongany. Toa tsy mahataitra ny tsirairay ny mahafantatra fa vola amina miliara no nahodin’ny mpitondra. Inona no hatao ? « Mivavaka amin’Andriamanitra no voalohany atao dia izay no hataontsika izao satria Izy irery ihany no tompon’ny aina » hoy ny Eveka.
Samy nanatanteraka fivavahana toy izany avokoa ireo disitrikam-piangonana rehetra manerana ny Diosezy tamin’ity andro ity.
Ny mpianatra sy mpanabe amin’ny sekoly katolika 18 sy ireo mpiasa eo anivon’ny Eglizy Katolika no lohalaharana namaly ny fanasan’ny diosezy. Tonga nanotrona izao fotoam-pivavahana izao ny manam-pahefana tao Antsirabe. Hita tao ny solombavambahoaka voafidy teto Antsirabe I sy ny lehiben’ny Faritr’i Vakinankaratra izay nankasitraka ny fandraisana fanapahan-kevitra nataon’ny Eglizy katolika amin’izao fotoam-pivavahana izao.
Andro iray fanairana izao. Mila fanohizana izany mba hivadika tokoa ny bainga ka hitondra fanatsarana anaty ho an’ny tsirairay ary hipaka amin’ny fiaraha-monina manontolo. Ho fanohizana ny ezaka natomboka dia nentanin’ny Eveka ny kristianina tsirairay hanao ny vavaka hasivin’andro manomboka izao.